यस्तो मिडिया काउन्सिल तुहाइदिनु नै जाती spacekhabar
यस्तो मिडिया काउन्सिल तुहाइदिनु नै जाती
राजेन्द्र दाहाल काठमाडाैं, ३१ वैशाख
एउटा मानिसले बिहानै उठेर नियमित रूपमा परेवालाई मकै छरिदिन्छु भनेर आफ्नै लागि नियम बनाउँछ । उसले त्यसको पालना पनि गरिराख्छ । तर कुनै दिन उसले त्यो पालना गरेन भने ‘तैंले आज परेवालाई मकै किन छरिनस्’ भनेर सरकारले वा अरू कसैले त्यसलाई कारबाही गर्न पाउँदैन । मिडिया काउन्सिल ऐनको विधेयकमा राखिएको दण्ड सम्बन्धी प्रावधानलाई पनि मैले त्यसैगरी बुझेको छु । नेपाली पत्रकारले आफ्ना लागि आफैंले आचारसंहिता बनाएका छन् । त्यो संहिताको परिपालना गर्ने–गराउने विधि र प्रक्रिया पनि तोकिएका छन् । अब यस्तो स्थितिमा, ‘तिमीले तिम्रो आचारसंहिता पालना गरेनौ भने म दण्डित गर्छु’ भनेर सरकार अघि सर्न कसरी मिल्छ ?
आचारसंहिता सन्दर्भमा पत्रकारका प्रयासमा राज्यले सघाउन सक्छ । जस्तो प्रेस काउन्सिललाई अझै संस्थागत र प्रभावकारी बनाउन सरकारले मद्दत गर्न सक्छ । आचारसंहिताको अर्थ र महत्व सबै पत्रकारसम्म पु-याउन र अनुगमन व्यापक पार्न काउन्सिललाई सरकारी सहयोग चाहिन्छ । आचारसंहिताको परिपालना गर्न पत्रकारहरूलाई थप प्रेरित गर्नु जरूरी छ । त्यसका लागि साधन–स्रोत चाहिन्छ । त्यो काममा राज्यले सघाउनुपर्छ । आजका मितिसम्म पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलले बनाएको आचारसंहिता एउटै छ । यी दुवैले एकअर्काको परिपूरकका रूपमा काम गरेका छन् । यसलाई पत्रकार र राज्यबीचको सहकार्यका रूपमा अथ्र्याउन कुनै कठिनाइ पर्दैन । आचारसंहिता जसले बनाएको हो, पालना गर्ने जिम्मा पनि उसैको हुन्छ । त्यसैले पत्रकारलाई ‘आचारसंहिता पालना गरिनस् भने तलाईं यति जरिवाना गर्छु’ भनेर राज्य आउनु भनेको ‘परेवालाई मकै छर्छु भनेको थिइस्, तैंले छरिनस्; त्यसकारण दण्ड गर्छु’ भने जस्तै हुन्छ ।
पत्रकारले आचारसंहिताका नाउँमा आफ्ना लागि आत्म अनुशासनको नियम बनाएका हुन् । अहिले त्यही आचारसंहितालाई उल्ट्याएर पत्रकारकै थाप्लोमा हाल्न खोजे जस्तो देखिंदैछ– ‘आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा’ भनेर । यो त पत्रकारलाई तह लगाउन पत्रकार नै प्रयोग गर्न खोजेको जस्तो देखियो । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा सरकारले पत्रकारलाई नै राखेको छ । उसले तोकेको पारिश्रमिक किन दिइनस् भनेर मन्त्री कुर्लन्छन् । यसमा पत्रकार बोल्न पाएनन् किनभने पारिश्रमिक निर्धारण र अनुगमन गर्ने पत्रकार नै छन् । त्यही निहुँमा मन्त्रीले पत्रकार र मिडियामाथि प्रहार गर्न पाएका छन् ।
अब, मिडिया काउन्सिललाई पनि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति जस्तै अर्को संस्था बनाउन खोजेको जस्तो देख्दैछु । किनभने मस्यौदा हेर्दा अहिलेको प्रेस काउन्सिलभन्दा धेरै तल्लो स्तरको मिडिया काउन्सिल बनाउन खोजेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, अहिलेको प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षको अवधारणा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बस्ने कुर्सी हो । पंचायतकालमा बहालवाला न्यायाधीश नै हुन्थे काउन्सिल अध्यक्ष । २०४७ को संविधानले बहालवाला न्यायाधीशलाई अर्को ठाउँमा बस्ने अनुमति नदिएपछि सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता वा वरिष्ठ पत्रकार भनेर विकल्प फराकिलो पारिएको थियो । २०४७ पछि यी तीनवटै प्रकारका व्यक्ति काउन्सिलको अध्यक्ष भए । पहिलो अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता नूतन थपलिया हुनुभयो । दोस्रो अध्यक्ष गोपालदास श्रेष्ठ हुनुभयो, वरिष्ठ पत्रकारबाट । म काउन्सिलको सदस्य हुँदा सर्वोच्चबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीश केदारप्रसाद आचार्य प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । पछि म आफू पनि अध्यक्ष भएँ पत्रकारको हैसियतमा । संसदका सदस्यहरू पनि काउन्सिलका सदस्य हुन्थे । तिनलाई सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले चयन गरेर पठाउँथे । सदस्यसचिव सूचना विभागका महानिर्देशक हुन्थे । त्यो भनेको निजामती सेवाको प्रथम श्रेणीको पद हो । अहिले त्यो पनि खारेज गरिएछ ।
त्यस्तै; मिडिया काउन्सिल गठनको निम्ति सदस्य सिफारिश गर्न सचिव तहको समिति सुझाइएको छ । जबकि, राष्ट्रिय सूचना आयोग गठनको सिफारिश नै सभामुखको अध्यक्षतामा हुन्छ । सूचना आयोग भन्दा पनि धेरै तल गयो काउन्सिल । हैसियत यति सानो बनाएर मिडिया काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन दिने बनाएको छ । जबकि काउन्सिलले सरकारलाई निर्देशन दिने अवधारणा चाहिं हुनुपथ्र्यो, प्रेसको सवालमा । काउन्सिलले त आवश्यक परेका बेला सरकारलाई पो ‘सेन्सर’ गर्नुपर्ने हो । तर यहाँ ठीक उल्टो काम गर्न खोजिएको छ । यसबाट त सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने अर्को एउटा संयन्त्र खडा गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर यो उहाँहरूको सपना मात्र हो ।
अहिले सरकार के सिद्ध गर्न खोज्दैछ भने, प्रेसमा छाडातन्त्र भयो, जथाभावी भयो, कसैको पनि इज्जत भएन भनेर मिडियाको कमजोर पाटो देखाइएको छ । त्यसैले डण्डा लगाएर नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । तर डण्डा लिएर नै पत्रकारिता स्वच्छ, सत्यनिष्ठ हुने भए प्रेस काउन्सिल र आचारसंहिताको अभ्यास पक्कै हुने थिएन । त्यसकारण उहाँहरू भ्रममा हुनुहुन्छ ।
सैद्धान्तिक रूपमा पनि मिडिया काउन्सिलको कुरा मैले बुझ्न सकेको छैन । भइराखेको प्रेस काउन्सिलले पत्रकारितासँग मात्रै सम्बन्ध राख्थ्यो । मिडिया भनेपछि त्यसले धेरै ठूलो दायरा ओगट्छ । सडक छेउ किनारका होर्डिङबोर्ड पनि मिडियाकै अंग हुन् । त्यो पनि अब काउन्सिलले अनुगमन गर्ने ? भोलि फिल्म पनि त्यसैभित्र आउने होला । विज्ञापन, सामाजिक सञ्जाल पनि त्यसैभित्र आउने भयो । तर यो कुरा कत्ति पनि व्यावहारिक देखिंदैन ।
अर्को कुरा, पत्रकारितालाई यो सबैमा लगेर घूलन गरिदिनुको अर्थ नेपाली प्रेसको हैसियत पनि त्यही हो भनेर देखाइदिन खोजिएको हो कि ? जिम्मेवार प्रेस र आमसंचारका अरू माध्यमहरू कहिल्यै पनि एउटै कुरा हुन सक्दैनन् । चिल्लो कागजमा छापिएको पर्चा र सानो पत्रिकाको महत्व फरक हुन्छ । तर अहिले पर्चा र पत्रिकालाई एउटै वर्गमा राख्न खोजिएको छ । भएभरका मिडिया र पत्रकारितालाई एउटै वर्गमा राखेर गोलमाल गर्न खोजिनुको अर्थ प्रेस र पत्रकारको भूमिका कमजोर बनाउने नै हुनसक्छ । तर समाज र मुलुकका लागि त्यो आफैंमा दुर्भाग्य हो । प्रेसलाई बद्नाम गरेर, नियन्त्रण गरेर, सताएर, तर्साएर दुई जना पत्रकार तर्सेलान्, दुई जना लगानीकर्ता डुब्लान् । तर प्रेस नै मरेपछि प्रेसलाई तर्साउनेहरूले के कुरा गर्छन् ? क्षणिक रूपमा उनीहरूले जितेको ठाने पनि समाज र मुलुकका लागि त ठूलो घाटा हुन्छ ।
सांसदहरू यदि कुनै हैसियत राख्छन् भने यो विधेयकलाई सबैले स्वतन्त्र रूपमा हेर्न सक्नुपर्छ । पार्टीको ह्वीपको डण्डा बज्रिनु अघि नै उनीहरूले आफ्ना नेतृत्वलाई कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ अथवा बुझ्न बाध्य पार्नुपर्छ कि यसले भोलि हामीलाई नै ‘ब्याकफायर’ गर्छ भनेर । आज दुईतिहाइ पाएर सत्तामा रहनुमा स्वतन्त्र प्रेसको पनि योगदान छ भन्ने कुरा सत्तामा बस्नेहरूले भुल्नुहुँदैन । भोलि पनि प्रेस चाहिन सक्छ । अहिले भने जस्तो मिडिया काउन्सिल बनायौं भने समाजलाई अघि बढाउन सकिंदैन, पार्टीलाई पनि घाटा लाग्छ भनेर सांसदहरूले नेतृत्वलाई सम्झाउन सक्नुपर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा मिडिया काउन्सिललाई तुहाइदिनु नै राम्रो छ । ल्याउँदै नल्याउनु जाती छ । प्रेस काउन्सिललाई जुन किसिमले निष्क्रिय पारेर राखिएको छ बरु त्यसैलाई सुसंचालन गर्नु उत्तम हुन्छ ।
देशका कानून पत्रकारलाई पनि लागू हुन्छन् । फलानो कानून बनाएर मिडियालाई धरासायी बनाउँछु नभन्ने हो र साधारण कानून बनाएर लागू गर्ने हो भने प्रेस–पत्रकारलाई पनि कुनै आपत्ति हुनुहुँदैन । तर कहिले साइबर कानून बनाएर पत्रकारलाई लक्षित गरिएको छ, कहिले के । प्रेस सम्बन्धी कानूनबाट पत्रकारलाई सकिएन भनेर छिर्के हानेर तह लगाउन खोजिएको देखिन्छ । नियत नै खराब जस्तो । सरकारमा बस्नेहरूले स्वनियमनको कुरा गर्ने गरेका छन् । तर त्यसनिम्ति नयाँ मिडिया काउन्सिल बनाउने होइन; बरु प्रेस काउन्सिल पनि खारेज गरिदिए हुन्छ । त्यसपछिका दिनमा नेपाली प्रेसलाई साँच्चिकै चुनौती खडा हुन्छ र उसले आफूलाई स्वतः नियमन गर्छ । त्यसो गर्न प्रेसजगत सक्षम छ । अहिले पनि आफ्नो आचारसंहिता पत्रकार आफैंले बनाएका हुन् । त्यसलाई परिपालन र अनुगमन आफैं गर्न पनि सक्छन् । मर्का पर्नेका मर्का र गुनासो आफैंले व्यवस्थापन गर्न सक्छन् ।
त्यसैले, प्रेस जगतलाई सधैं डर, डण्डा देखाएर तह लगाउँछु भनिराख्नु जरूरी छैन र त्यसो गर्नु सार्थक पनि हुँदैन । किनभने नेपाली समाज, नेपालको राजनीति र दलहरूलाई पनि डो¥याउने हैसियत राखेको छ प्रेसले । त्यसकारण प्रेसलाई त्यति कमजोर, निमुखो ठान्नु भूल हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ३१, २०७६, ११:५६:००
राजेन्द्र दाहाल @RDahal62 वरिष्ठ पत्रकार दाहाल प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष हुन्।
पत्रकार विरुद्धका उजुरी सुन्ने अड्डा प्रहरी थाना होइन
सीमा विवाद : कूटनीतिक संवादबाटै निकास